TIFF 2021: 'Dashcam' inonetsa, Chaotic Thrill Ride
musha Anotyisa mafirimu TIFF 2021: 'Dashcam' ndeye Inonetsa, Chaotic Thrill Ride
TIFF 2021: 'Dashcam' ndeye Inonetsa, Chaotic Thrill Ride
Zvakaoma kutarisa, asi haugone kutarisa kure
by Kelly McNeely September 12, 2021 689 maonero
Director Rob Savage iri kuve tenzi nyowani wekutyisa. Mafirimu ake anotya kutya aine chisarudzo chakatsunga; anovaka kukakavara, anoiburitsa nekuseka kuseka, uye anokanda mukati zvinokwakuka kusvetuka izvo - kunyangwe pazvinotarisirwa - zvinoshamisa kurira. Nemufirimu wake wekutanga, Host, Savage akagadzira inoshamisa screen screen scare fest iyo yakafotwa zvachose pamusoro peZoom panguva yeiyo huru COVID-19 kukiya kwe2020. Yake Blumhouse-yakaburitswa yekutevera, Dashcam, livestreams kutya kubva kumasango ane mimvuri eEngland.
Dashcam inotevera inokonzeresa online inodzikisira ine hunhu hunhu hunokonzeresa husingamire husiku. Mumufirimu, akasununguka wedashcam dj anonzi Annie (akaridzwa na chaiye-hupenyu muimbi Annie Hardy) anosiya LA kunotsvaga denda rekuzorora muLondon, achirovera pafurati reshamwari uye aimbova bhendi, Stretch (Amar Chadha-Patel). Annie's anti-liberal, vitriol-spewing, MAGA ngowani inoshandisa hunhu inokwenya musikana waStretch nenzira isiriyo (zvinonzwisisika), uye rake chairo nyonganiso rinomukuvadza kupfuura kunaka. Iye nabs mota uye anofamba mumigwagwa yeLondon, uye anopihwa wad yemari kutakura mukadzi anonzi Angela. Anobvuma, uye nekudaro anotanga dambudziko rake.
Annie munhu anoda kuziva. Iye ari maviri anokwezva uye anosemesa, anokurumidza-kuruka uye akavhara-pfungwa. Kuita kwaHardy kunofamba netambo iyi ine simba risingafungi; Annie (semunhu) - pane dzimwe nguva - zvinotyisa zvisingaite. Asi pane chimwe chinhu nezvake chausingakwanise kurega kutarisa.
Zviripachena - sekutsanangurwa kwayakaitwa-pre-kuona sumo kubva kuSavage - iyo firimu yanga isina script (mupfungwa yakasimba yekutaurirana nhaurirano), saka mitsara yaAnnie yekukurukurirana yaive yakawanda (kana zvisiri zvachose) yakagadziriswa. Nepo Hardy iye pachake achibata zvimwe zvitendero, Annie we Dashcam iwedzero vhezheni yake. Iye anochema nezve COVID kuve chitsotsi, anotsvaga "feminazis" uye kufamba kweBMM, uye anokanganisa chitoro mushure mekunge akumbirwa kupfeka mask. Ari… anotyisa.
Icho chinonakidza uye chakashinga sarudzo, kuisa iyo firimu mumaoko emunhu ane zvinotyisa zvinotyisa. Izvo zvinobatsira kuti Annie akapinza, uye muimbi ane tarenda ane hunyanzvi hwekujekesa pa-iyo-nzvimbo rwiyo. Isu tinobata zvishoma zveizvi kuburikidza nefirimu, asi ndipo apo Hardy freestyles kuburikidza neyekupedzisira zvikwereti izvo isu tinonyatsomuona iye muchinhu chake. Sezvineiwo, Bhendi Mota - iyo show Annie kubva mumotokari yake - iri chaizvo kuratidzwa chaiko paHapps nevanopfuura vateveri ve14k. Izvi, muchokwadi, ndizvo Savage akamuwana sei. Akakweverwa neake akasarudzika charisma uye neupenzi, uye akafunga kuti zvingave zvine hungwaru kukanda vhezheni yeiyi muchiitiko chinotyisa.
Kana zvasvika kuna Annie semunhu, iye hyperbolized vhezheni yeimwe yezvematongerwo enyika seti yezvitendero, uye achazokonzeresa kumwe kupesana mumaonero kune iyo firimu. Asi kana paine chero mhando inobvumidza vanhu vanoparadzanisa kuti vatungamire, zvinotyisa.
Dashcam ingangoonekwa zvakanyanya pachiratidziro chidiki, kana zvirinani kubva kumashure mashoma mitsara yeimwe hombe. Iyo camerawork inowanzo shakatika - chaizvo shaky - uye yechitatu chiito chemufirimu chinopinda mune mamwe eanotyisa, asina kujairika kamerawork yandakaona. Kunyangwe iri zita, iyo kamera inowanzo siya mudhi. Annie anomhanya, achikambaira, uye kupwanya aine kamera muruoko, uye zvinogona kuve zvinonetsa kuti uone kuti chii chaizvo chiri kuitika.
Chinhu chakanyanya kudzikira inyaya yekuti yakawanda yemufirimu yakaoma kuona, nekuda kweiyo yakanyanyisa kushatisa kamerawork. Dai yaive yakanamatira padashcam zano - to the Spree - zvingadai zvakave nyore kutevera, asi zvakare zvingadai zvakarasa yakawanda yemanic spark iyo inokonzeresa moto wefirimu.
Chinhu chimwe chandakakoshesa chandinoziva kuti chinozokanganisa vamwe vaoni ndechekuti zviitiko zvacho… undefined. Isu hatinyatso kuziva zviri kuitika kana nei. Mukudzivirira kwechirevo chinokatyamadza, icho chinobvumidza yakawanda yekuchinjika uye inowedzera chinoshamisa chinhanho chechokwadi kune zviitiko.
Kana iwe ukakandirwa mumamiriro anotyisa, ndeapi mikana yekuti iwe unozogumburwa pane imwe yekurekodha odhiyo iyo tsananguro uye unotsanangura zviitiko zvese zvawakaona. Kana kuti iwe unotora nguva yekuverenga kuburikidza neichangobva kuwanikwa bhuku kana chinyorwa, kana kubvunza chapupu neruzivo rwepedyo nezve zviri kuitika. Hazvigone, ndizvo zvandiri kutaura. Mune dzimwe nzira, iko kuvhiringidzika uye kusanzwisisika kunoita kuti izvo zvisiri izvo zvive zvechokwadi.
Kune dzimwe nguva dzakanakisa dzekupfuura-kwepfudzi mapfuti ari kutonhora zvechokwadi uye akagwinya mukugadzira chinotyisa chinotyisa. Savage inoda yakanaka kusvetuka inotyisa, asi iko kusimbisa kuri kugona pano. Iye anoziva zvaari kuita, uye anozvidhonza zvakanaka.
apo Host vakaratidza kushamwaridzana kwepamba, Dashcam inotambanudza makumbo ayo zvishoma nekuenda kuenda kupasirese uye kuongorora nzvimbo zhinji, yega yega inokambaira kupfuura yekupedzisira. Nerutsigiro rwe genre hofori mugadziri Jason Blum, Savage inochinja yakakura, ine ropa reropa mhedzisiro iri kure kure kune vanozvininipisa Host-era kukiya ita-iyo-iwe pachako fizi. Neichi chiri chekutanga che chibvumirano chemifananidzo mitatu neBlumhouse, ndiri kuda kuona izvo zvaanouya nazvo zvinotevera sezvo nyika ichivhura zvishoma.
Dashcam haizofadzi kune wese munhu. Hapana firimu inoita. Asi Savage's pedal-to-the-metal mafungiro kune chinotyisa inonakidza kutarisa. Sezvo Dashcam inotora kumhanya, inobhururuka zvachose kubva panjanji uye inokwira kune yakachena mhirizhonga kutya. Iyo firimu ine mukurumbira ine anoparadzanisa protagonist uye yakavhurika-inopera kutyisa, uye inosungirwa kutendeuka mimwe misoro. Mubvunzo ndewokuti, mangani misoro ichatendeuka.